SkAdNetwork? Sandbox Privacy? Mijoro miaraka amin'ny MD5s | Martech Zone
Ny fanambaràn'ny Apple tamin'ny Jona 2020 fa ny IDFA dia ho fampiasa opt ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny famoahana ny iOS 14 tamin'ny volana septambra izay nahatsapa fa nesorina avy taty ambanin'ny Indostrian'ny doka 80 miliara, mandefa mpivarotra ho any anaty fikorontanana hitadiavana ny zavatra tsara manaraka. Roa volana mahery izao, ary mbola mikorapaka ny loha.
Miaraka amin'ny tato ho ato fanemorana tena ilaina hatramin'ny 2021, isika amin'ny sehatry ny indostria dia mila mampiasa ity fotoana ity amin'ny fomba mahomby mba hahitana fenitra volamena vaovao amin'ny fanangonana angon-drakitra ho an'ny mpanjifa; iray izay miresaka olana ara-tsiambaratelo sady afaka mikendry granular. Ary mino aho, manerana ny solaitrabe, fa io fenitra vaovao io dia ny hasin'ny mailaka MD5.
Inona ny MD5?
Ny algorithm MD5 message-digest dia asan'ny hash efa niasa namokatra sanda hash 128-bit.
Betsaka amin'ny indostria no miandry am-pitoerana SkAdNetwork an'i Apple ary Sandbox momba ny tsiambaratelo an'ny Google Chrome, fa samy manana ny fatiantoka maro. Samy misoroka ny varotra misokatra satria ekosistema mihidy no tompony sy ampiasain'ny sehatra mihitsy. Raha toa ka miorina amin'ireo fotodrafitrasa doka ireo ny indostria dia afaka mandrindra bebe kokoa sy misoroka ny fandrosoana eo amin'ny sehatry ny indostria ireo orinasa goavambe ireo raha tsy hoe misy fenitra misokatra misokatra kokoa.
Inona ny SkAdNetwork?
SKAdNetwork dia rafitra iray amin'ny fiarovana ny fiarovana ny tsiambaratelo momba ny fametrahana finday. Izy io dia mikendry ny hanampy amin'ny fandrefesana ny tahan'ny fiovam-po amin'ny fampielezana fampiharana (CPI) nefa tsy hanimba ny mombamomba ny mpampiasa.
Inona ny SKAdNetwork ary inona no ataony?
Ankoatr'izay, ireo rafitra ireo dia tsy mahita ny fanampiana sarobidy indrindra ho an'ny tanjona - angona tahiry-potoana. Satria ny fampandrenesana momba ny fanamelohana dia alefa eo anelanelan'ny 24 ka hatramin'ny 48 ora aorian'ny zava-misy, ny mpanao dokambarotra dia tsy ho afaka mikendry ny mpanjifa amin'izao fotoana izao eny an-tsena ary tsy ho afaka hamatotra ny asan'ny fampiharana amin'ny fotoana manokana, izay manakana ny mahasoa ny angona mihitsy.
Ankoatr'ireo fihemorana rehetra ireo dia tsy tokony jerentsika ireo risika voajanahary amin'ny famelana orinasa roa hifehy ireo data rehetra mifandraika amin'ny tsiambaratelo ireo. Ity antony ity ihany dia tokony ho ampy hijanonan'ny indostria alohan'ny handraisana ireo vahaolana natolotry ny Apple sy Google.
Mba hisorohana ireo goliata-teknolojia ireo tsy ho tonga mpiandry vavahady matanjaka kokoa ho an'ny mpanjifa, ny indostrian'ny varotra sy ny varotra niomerika dia tsy maintsy mijoro amin'ny vahaolana misokatra kokoa ho an'ny angona famantarana.
Satria ny MD5 dia tadin'ny hexadecimal novaina avy amin'ny adiresy mailaka nandalo algorithm hashing, ny rafitra iray manontolo dia manodina ny mombamomba ny mpanjifa mafampana amin'ny làlana tokana izay tsy azo ampifandraisina amin'ilay olona. Mba hahatratrarana izany, izy dia identifier mifantoka amin'ny fiainana manokana izay afaka mampifandray am-pilaminana ny angona mba hamoronana mombamomba ny mpampiasa tsy fantatra anarana nefa mbola afaka mikendry doka amin'ny ambaratonga goavambe.
Satria matetika ny mpanjifa mitazona ny adiresy mailaka voalohany mitovy amin'ny taona maro, MD5s dia manana sari-tany lehibe amin'ny fitondran-tena sy ny hetsika nomerika, ka noho izany, ny tranokala, ny rindranasa, na ny sehatra rehetra izay manana tobim-pampiasana voasoratra anarana dia afaka mahazo tombony amin'ny angona matanjaka kokoa, doka. fifandraisana, ary fananganana vola.
Vahaolana voasedra sy voaporofo ara-potoana, MD5, indrindra fa miaraka amin'ny mombamomba ny adiresy IP, no tambajotra mahomby indrindra mandroso amin'ny ho avy tsy misy MAID. Miaraka amin'ny MD5s, ny dokam-barotra dia afaka manatona ireo mpanjifa mety amin'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera izay misy ny fisoratana anarana anarana ho an'ireo mpampiasa, ary izany data izany dia afaka ampifandraisina amin'izy ireo mba hananana mombamomba na tsy fantatra anarana aza. Raha misy ny fananganana olona betsaka dia hiakatra be ny sandan'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera.
Inona no atao hoe MAID?
ID momba ny finday na doka finday: mari-pamantarana tsy miankina amin'ny mpampiasa, azo averina, tsy fantatra anarana mifandraika amin'ny fitaovan'ny finday avo lenta an'ny mpampiasa ary tohanan'ny rafi-piasan'ny findainy. Ny MAID dia manampy ny mpamorona sy ny mpivarotra hamantatra hoe iza no mampiasa ny fampiharana azy ireo.
Ny marina dia, tsy misy zavatra tsara manaraka, farafaharatsiny mbola tsy. Na izany aza, ny MD5 dia toerana malefaka kokoa noho ny an'ny Google na Apple. Tsy tokony hipetraka eo amin'ny rafitra mihidy izahay hamaly ny filan'ny tsiambaratelo. Ilaina ny fiarovana ny mombamomba ny mpanjifa sy ny fampahalalana saro-pady, fa kosa mila mahay miatrika ny filan'ny mpampiasa sy manompo azy ireo vaovao mifandraika amin'izy ireo. Mandra-pahatonganà rafitra vaovao misokatra dia andao hifikitra amin'izay fantatsika fa hiasa.
Tags: paomaCPImailaka hashGooglegoogle chromehashidfaiOS 14md5md5 hashid amin'ny findaydoka findaydokam-barotra findayboaty manokana momba ny fiainana manokanaSKAdNetwork
David Finkelstein dia mpisava lalana amin'ny Internet, mpandraharaha ara-teknolojia ary mpanorina orinasan-tserasera marobe nanomboka tamin'ny andro voalohan'ny internet tamin'ny taona 1994. Mpiara-miasa sy tale jeneralin'ny BDEX, ny sehatra fifanakalozana data voalohany sy lehibe indrindra any Etazonia
CSV Explorer: Miaraha miasa amin'ireo rakitra CSV lehibe